Jeesow “Is-Qarxin Siyaasadeed Ayaa Kismaayo Ka Dhacday” | Xaqiiqonews
Jeesow “Is-Qarxin Siyaasadeed Ayaa Kismaayo Ka Dhacday”
Xildhibaan Daahir Amin Jeesow ayaa eedeyn ba’an u jeediyey wax uu ugu yeeray “Safar Halis ah” oo dhawaan Ay Kismaayo Ku taageen hogaamiyaal caan ah.
Diyaarad nooceedu lagu sheegay ” Fokker 50″ oo ay leedahay Dowladda Kenya ayaa ka dagtay Kismaayo iyada oo halkaasi ka dajisay Siyaasiinta kala ah Shariif Sakiin iyo Cabdkariin Guuleed.
Xildhibaan Jesow oo Wariyaasha Kula hadlaayey Muqdisho aya sheegay Safarkii diyaaradaasi ku tagtay Kismaayo in uu ahaa mid aad u halis badan madaama diyaaradda ay ku dhuumtay Sadaasha hawada Soomaaliya.
Jeesow Ayaa yiri “Waxa ay halis u aheyd in ay ku dhacdo diyaarado kale” isagoo intaasi ku daray in Hawada Soomaaliya ay tahay mid aad u mashquul badan oo halkii daqiiqaba ay marayaan ugu yaraan 12 diyaaradood.
Xildhibaanka ayaa uga baaqay Df-ka Soomaaliya in ay Jawaab cad ka siiso Barlamaaanka Sidii ay wax u dhaceen.
Dhanka kale Dowladda Soomaaliya ayaa gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya iyadoo ku eedeysay in Kenya ay ku xadgudubtay xeerarka Caalamiga ee Duulimaadyada aduunka.